Ọkachamara Semalt: WebHarvest, 5 Uru mbu maka azụmahịa gị
Nchịkọta data na-enyere ndị ọchụnta ego aka ime mkpebi ndị dị oke mkpa maka ihe ịga nke ọma. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa na ndị ọrụ na-ezere iji ndị na-ewepụta ihe na weebụ site na ọrụ na atụmatụ ha. N'adịghị ka ngwá ọrụ ndị ahụ, WebHarvest bụ ọrụ ọrụ ntinye data nke a pụrụ ịdabere na ya. Ọ na - enyere ndị ọchụnta ego aka ịnakọta na nyochaa data, ma na - arụ ọrụ dị egwu. Ọrụ a na-eji ma nhazi ederede na teknụzụ HTML ma wepụ ihe ọmụma site na ibe weebụ - web design company new zealand. A na-akpọ abamuru ndị dị na ya n'okpuru:
1. Na-anakọta ozi banyere ndị asọmpi gị:
Site na WebHarvest, ịnwere ike ịnakọta ozi gbasara ndị asọmpi gị, ngwaahịa ha, ọrụ ha, usoro ahịa, ahịa na-emepụta na ọnọdụ ọhụrụ. Na nkenke, ị ga-amata ihe niile gbasara ndị na-agba gị ma nwee ike ime mkpebi ndị amamihe dị na ha ime ka ịzụlite azụmahịa gị. Ịntanetị jupụtara na ozi, ọtụtụ ndị na-asọmpi na-arụkwa ọrụ. WebHarvest ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnakọta na ịhazi data banyere ndị isi asọmpi gị.
2. Teknụzụ na-arụ ọrụ igwe:
WebHarvest kacha mara amara maka igwemịzụ ya na-achọpụta nkà na ụzụ ma nwee ike nyochaa data na usoro a haziri ahazi. Naanị ị ghaghị ịkọwa data ma ọ bụ tinye URL ahụ ịchọrọ iwepụ, WebHarvest ga-amalite ịrụ ọrụ ya ma nye gị nzaghachị na nke a pụrụ ịdabere na ihe nke nkeji.
3. Nsonaazụ siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya:
Nye onye ọchụnta ego, ọ dị mkpa ịkpọkọta na wepụ ozi na obere oge. Mgbe ụfọdụ ọ / ya ga - ezute oge igbu oge ma mee ọtụtụ ihe ịma aka. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ịnwere ike iji WebHarvest ma nweta ọrụ gị. Otu n'ime ihe kachasị iche iche nke ngwá ọrụ a bụ na ọ na-ewepụta data gị na sekọnd ole na ole ma nwee ike ịrụ ọrụ 1200 na oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike iwepụ ọtụtụ ibe weebụ dịka ịchọrọ ma rụzuo ọrụ gị n'ime awa ole na ole, jiri oge dị mfe na-ezukọta oge gị. Tụkwasị na nke a, ihe nsonaazụ a na-enye bụ ihe ziri ezi ma nwee ntụkwasị obi. WebHarvest na-edozi obere njehie na njehie na-akpaghị aka ma nweta gị ozi na-ezighị ezi na nke a na-agbanwe agbanwe.
4. Ejikwa ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ:
Ọ bụrụ na ị malitere ụlọ ahịa ịzụ ahịa ma chọọ ịnakọta ozi site na Amazon na eBay, ị ghaghị ịpụ maka WebHarvest. Site na ozi a, ị nwere ike ịnweta ozi gbasara ọtụtụ puku ngwaahịa, nkọwa ha, ihe oyiyi na ọbụna ndị ahịa nyocha. A na-ekpochapụ data a ozugbo na ị ga-enwe ike ịnweta ya n'ụdị tebụl na ndepụta. Ezi data na-achịkwa ụwa na WebHarvest na-ekwe nkwa na a pụrụ ịdabere na ya, na-enyere gị aka ịmalite azụmahịa gị n'oge na-adịghị anya.
Onye ọchụnta ego ga-achịkwa ọtụtụ ọrụ ma kwesiri inwe ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ na nkeji. Ọ / ọ ga - anakọta data sitere na ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ. WebHarvest nwere nkà na ụzụ na-egbusi ike ime ka ọrụ gị dị mfe. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a maka nsonaazụ ọma ma nwee ike iwepu ọtụtụ ibe weebụ n'otu oge. Ọzọkwa, ịnwere ike ịlele ozi ala na akwụkwọ topographical na ọrụ a ma gbanwee ya na usoro a pụrụ iji mee ihe.